Dhorkawwan labsii yeroo hatattamaa ija ogeessota seeraatiin
Dhorkawwan labsii yeroo hatattamaa ija ogeessota seeraatiin Featured
Jeequmsa bara darbe kutaalee Itoophiyaa garagaraa keessatti ka'aa turan heera biyyi keenya ittiin bulaa jirtu gaaffii keessa waan galcheef ykn seera jiruun to'achuun waan hindanda'amneef, mootummaan keeyyata 93 bu'uureffachuun Fulbaana 28 bara 2009 irraa eegalee Labsii Yeroo Hatattamaa baasuun ji'oota jahaaf hojiirra akka oolu taasisuunsaa ni yaadatama. Labsiin Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataan raggaasifamuun hojiirra oolaa tureefi jiru kun danbiiwwan addaaddaa baasuun raawwiinsaa Koomaandi Poostiitiin madaalamaa kan ture yoo ta'u, yeroo yerootti ummatni akka hubatu taasifameera. Turtii ji'oota shaniin boodas raawwiin labsichaa sakatta'amuun wayita ilaalamu jeequmsa duraan balaa geessisaa ture hamma tokko to'achuun danda'amee jira.
Ka'umsuma kanaan dhorkamoota labsicha keessatti hojiirra oolaa turan keessaa muraasni ka'uusaanii Walittiqabaan Komaandi Poostiifi Ministira Raayyaa Ittisaa Obbo Siraaj Fageessaa torbee darbe beeksisaniiru. Dhorkamoota danbii lakkoofsa 1/2009fi 2/2009n hojiirra oolaa turan keessaa danbii lakk. 3/2009n ammoo kanneen kaafaman, naannawaa bu'uuraalee misoomaa gurguddoo kanneen akka warshaalee qonnaa, abaaboofi kanneen biroo keessa sa'aatii eeyyamameen alatti jechuun galgala sa'aatii 12:00 hanga ganama 12:00 duras ta'e booda seenuun hindanada'amu, nama shakkamaa ta'e tokko ajaja Mana Murtii malee to'annaa seeraa jala oolchuu, bakka barbaachisaa ta'etti tursiisuufi leenjisuu, akkasumas gadilakkisuufi mana murtiitti dhiyeessuu, ajaja Mana Murtii malee sa'aatii kamittuu sakatta'iinsa taasisuufi meeshaalee yakki ittiin raawwatama jedhamee shakkamu hirmaannaa hawaasaafi poolisiitiin qabuu, ergaawwan karaa Raadiyoo, Televiizhinii, tiyaatiraa, ogbarruufi suurawwanii balaa geessisuuf darban to'achuufi qabeenyawwan namoota dhuunfaa ajaja Mana Murtii malee saamaman kamiyyuu sakatta'uun abbaa qabeenyaaf deebisuu kanneen jedhaman guutummaan kaafamaniiru.
Dhorkaawwan muraasa kaafaman kunneen ija seeraan akkamitti akka ilaalaman ogeessota seeraa lama dubbisnee akka armaan gadiitti dhiyeessineerra.
Obbo Jeylaan Jamaal Magaalaa Adaamaafi Finfinneetti Ogeessa Seeraati. Labsiin Yeroo Hatattamaa Fulbaana darbe dhumaarratti labsamuusaa yaadatu. Kunis sababa jeequmsa keessattuu Naannoo Oromiyaatti lubbuun lammiilee hedduufi qabeenyi waan badeef seera biyyattiin ittiin bulaa jirtuun to'achuun humnaa ol ta'ee ture. Kanuma to'annaa seeraa jala oolchuuf mootummaan heera biyyattii keeyyata 93/1-4 irratti hundaa'uun Labsii Yeroo Hatattamaa ji'oota jahaaf hojiirra akka oolu taasisuun biyya bulchaa jira. Kanarra ka'uun dhuguma jeequmsa ture tasgabbeessuun danda'ameera. Kuni ija seeraan wayita ilaalamu, fudhatamaa waan ta'eef bu'aa barbaadamu argamsiisuusaa dubbatu.
Haala kanaan, dhorkaawwan kaafaman keessaa toora invastimantiifi bu'uuraaleen misoomaa gurguddoon jiranitti galgala sa'aatii 12:00 hanga ganama sa'aatii 12:00tti seenuun dhorkamee kan ture yoo ta'u, kun ka'uunsaa gama tokkoon mirga socho'anii hojjechuu lammiileefi hojjettoota warshaalee ykn bu'uuraalee misoomaa kamuu kan eegsiseedha. Gama biraan ammoo abbootiin qabeenyaa biyyattii keessatti invastimantiirratti bobba'uun hojjechaa jiran hedduu waan ta'aniif, sa'aatiin daangeffamuunsaanii sodaafi dhiibbaa isaanirratti uumaa tureera. Kunimmoo hojiileen bu'a qabeessi akka hinhojjetamneef hanga tokko danqaa ta'ee ture. Kanarraa kan ka'e faayidaan lammiileefi galiin biyyaas hangi tokko akka hir'atu taasiseera. Dhorkaan kun ka'uunsaa ammoo faayidaa hawaasaafi galii biyyaa guddisuurra darbee ilaalchi invastaroota biyya keessaafi alaa haala gaariin bakka duraan turetti akka deebi'u kan godhu ta'uu himu Obbo Jeylaan.
Kana malees, kanneen ji'oota jahaaf dhorkaman keessaa yeroo barbaachisaa ta'ee argametti nama tokko ajaja mana murtii malee to'annaa jala oolchuufi hidhuun eeyyamamaa tureera. Kunimmoo Heeruma biyyattiin qabduun labsicha keessatti hojiirra haa oolu malee seeraan kan hindeggaramneedha. Hanga Heera biyya tokkoo seera jiruun kabachiisuun hindanda'amnetti garuu dhorkuunis ta'e; eeyyamuun kan danda'amu ta'uusaa dubbatu Obbo Jeelyaan. Kunis jiraachuufi jiraachuu dhabuu lammiilee kan murteessu waan ta'eefidha. Kana murteessuuf ammoo aangoo Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatu qaba. Kanaaf, dhorkamni kuniifi kanneen biroo kaafamuunsaanii ija seeraan yoo ilaalaman sodaa hawaasaa caalaatti kan hir'isuudha. Kunimmoo namni kamuu oliifi gadi socho'ee jireenyasaa gaggeeffachuuf mirga guutuu kan argatu ta'uusaa ibsa jedhu.
Magaalaa Finfinneetti Ogeessa Seeraa kan ta'an Obbo Zafaaniyaas Alamuu gamasaaniitiin akka jedhanitti, dhorkamoonni Labsii Yeroo Hatattamaa keessatti hojiirra oolaa jiran ka'uunsaanii ija seeraan sirriidha; dhorkamuunsaanillee Heeraan taa'eera. Fakkeenyaaf, ajaja mana murtii malee nama tokko qabuufi hidhuun seeraan hindeggaramu. Kun ka'uunsaa mirgi dimokiraasii lammiilee sababaan molqamee ture bakkatti akka deebi'u taasiseera. Kana waliinis ergaawwan karaa midiyaalee, ogbarruufi tiyaatiraa dhiibbaa geessisuuf darban labsichaan dhorkamaa turaniyyuu wayita ammaa ka'uunsaanii karaa seeraan walabummaa pireesii Heera biyyattii keessatti labsii 590/2000n tumamee jiru kan kabaju ta'uu Obbo Zafaaniyaas ni ibsu. Kunis odeeffannoowwaniifi ragaaleen icciitii biyyaafi nama dhuunfaa ta'uun seeraan dhorkamaniin alatti namni kamuu odeeffanoofi dhaamsa barbaade kennuufi dabarsuuf mirga qabaachuu kan dhugoomsudha. Kunimmoo ummatni biyyattii mirga namummaafi dimokiraasii duraan Heera biyyattiitiin argate bakka duraatti kan deebisu waan ta'eef, sodaafi dhiibbaa jiru kan maqsu ta'uu dubbatu.
Walumaagalatti, dhorkamoonni Labsii Yeroo Hatattamaa keessatti hojiirra oolaa turan muraasnisaanii kaafamuunsaanii ummataaf hiika kan qabu yoo ta'u, sochii guddina dinagdee biyyattiifillee murteessaadha. Sababiinsaa lammiileen seeraan dhorkaman si'aayinaan hojjechuun bu'aa buusuu waan hindandeenyefidha. Nageenyi garuu biyya kamiifuu wabii waan maraa ta'uu ogeessotni kunneen irratti waliigalu.
Torban kana/This_Week 6897
Guyyaa mara/All_Days 1291408